အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB]
Myanmar IT Resource Forum » ADVERTISEMENT ZONE » » Job Opportunity » အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB]
1 အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 9th February 2010, 2:21 pm
အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အား ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်သော ၀န်ထမ်းတစ်ဦးအလိုရှိသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ကလောမြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ နေရေး စားရေး အကုန်စီစဉ်ပေးမည်။ အင်တာနက်ဆိုင်၏ တစ်နေ့ဝင်ငွေ၊ တစ်လ၀င်ငွေပေါ်မူတည်၍ Percentage ထပ်မံရမည်။
Percentage ထပ်မံပေးမည်ဖြစ်၍ လခလျော့နည်းနိုင်ပါသည်။ (အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ လခ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။)
လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးကို တစ်ယောက်တည်း ထိန်းချုပ်ရမှာပါ။
524156၊ 721869 ကိုစည်သူ့ ထံသို့ဖုန်းခေါ်ပါ။
2 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 9th February 2010, 7:39 pm
working ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာပဲ။
3 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 9th February 2010, 7:42 pm
အော်။ ငါ့နှယ် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတဲ့
4 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 24th March 2010, 5:34 pm
အလုပ်ကို စိတ်ဝင်းစားပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် မေးလ်ပို့ပေးပါ ရန်ကုန် မှာ မလုပ်ချင်တော့ဘူးလေ [You must be registered and logged in to see this link.] ကို ပို့ပေးပါနော် ။ လူရသွားပြီးလားလို့ မသိလို့ ဖုန်းမဆက်တာပါ
5 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 24th March 2010, 5:46 pm
မြိတ်မှာဆိုရင်ပြောနော် ဟီး ရှမ်းပြည်ကိုတော့မသွားချင်သေးဘူး
6 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 8th May 2010, 10:57 pm
7 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 15th June 2010, 12:41 pm
၇န်ကုန်မှာ အင်တာနက်နဲ့ ဂိမ်းဆိုင်ကို ဆားဗစ်ပေးရပါမယ်
မနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိပါ စက်အလုံးပေါင်း ၇၀ ကျော်ရှိပါတယ်
လစာကတော့ ၁သိန်းခွဲ နဲ့ နစ်သိန်းကြားပါ A+ နင့် နက်ဝတ်ပိုင်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရပါမည်
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ ပီအမ်ပို့ပြီး မေးနိုင်ပါသည်
8 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 15th June 2010, 12:53 pm
ကိုရှင်းသန့် ရေ တစ်မျိုးတော့မထင်နဲ့နော်
တစ်ခု မေးမယ် ဗျာ သူက ဘာတွေ လိုလဲ အလုပ်လျှောက်ဖို့ အတွက်
9 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 17th June 2010, 5:25 pm
ပီအမ်ပို့ခွင့်ကြီးကို ပိတ်ထားပြီးတော့ ပီအမ်ပို့ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမှာတုန်း
ဖုန်းနံပါတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေး ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း မေလ်းလေးကိုပေးလေ...
10 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 18th June 2010, 11:29 am
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ ကျနော်မေးလ်ကတော့ [You must be registered and logged in to see this link.]
11 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB] on 18th June 2010, 5:47 pm
အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အား ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်သော
၀န်ထမ်းတစ်ဦးအလိုရှိသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ကလောမြို့တွင်
တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ နေရေး စားရေး အကုန်စီစဉ်ပေးမည်။ အင်တာနက်ဆိုင်၏
တစ်နေ့ဝင်ငွေ၊ တစ်လ၀င်ငွေပေါ်မူတည်၍ Percentage ထပ်မံရမည်။
12 Re: အင်တာနက်ဆိုင်အတွက် ၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်။ [JOB]